मदन भण्डारीले कहिले न्याय पाउँछन् राष्ट्रपति ज्यू ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न काण्डहरू घटेका छन् । भण्डार खाल पर्व, कोतपर्व, मकै पर्व, हुँदै मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र राजदरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि इतिहासका पानामा सुरक्षित रहेका छन् । बेलाबेला राजनीतिक व्यवस्थाका परिवर्तनको नाममा भएका कयौँ व्यक्तिहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् । तर मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको रहस्य अहिले सम्म बाहिर आउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । यी तमाम घटनाहरूका बिच पङ्क्तिकार जवाफ माग गर्दछ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका एक महासचिव एवम् जनताको बहुदलिय जनवादका प्रणेयता मदन भण्डारीको जीवनीबारे पढे र सुनेको एउटा लाग्दो घटना हो दास ढुङ्गा हत्याकाण्ड हो । २०५० साल जेठ तीन गते उहाँको रहस्यमय घटनामा भएको मृत्युको अहिले सम्म कुनै ठोस प्रमाण पत्ता नलाग्नु दुखद विषय हो । बहुदलीय जनवादका ब्याख्याता भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। जीवराज आश्रितको मृत अवस्थामै गाडीमै शव भेटिएको थियो भने मदन भण्डारीको घटनास्थलदेखि धेरै तल नारायणी नदी किनारमा तिन दिन पछि शव भेटिएको थियो। यो घटनाको छानबिन गर्न धेरै आयोग बने पनि तीनले पनि वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेनन्।
हाल उनकै सिद्धान्तका कारण नेकपा देशकै ठुलो पार्टी बनेको छ । उनकै योगदानका कारण सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । उहाँको देवावसन पछि उहाँको धर्म पत्नी सक्रिय राजनीति हुँदै दोस्रो कार्यकालको रूपमा राष्ट्रपति पद आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ । श्रीमान् श्रीमती भनेका एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन । मदन भण्डारीको ब्याजमा नाफा लिनेहरू प्रत्येक वर्ष उहाँको सालिकमा पुष्प गुच्छा राख्दैमा सालिकमा माला अर्पण गर्दै अनि सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली पोस्ट गर्न हतारिएका छन् । तर यो दुर्घटना हो या हत्या भन्नेबारेमा यो उहाँको धर्मपत्नी अनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू किन बोल्दैनन् ? यो हत्या हो या दुर्घटना हो भन्ने जवाफ पार्टी पङ्क्तिले दिन पर्छ कि पर्दैन ? के सालिकमा माला लगाउँदै मदन भण्डारीको गुणगान गाउँदैमा उहाँको आत्माले शान्ति पाउँछ त ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
आज भण्डारी र आश्रित दिवङ्गत भएको २७ वर्ष पूरा हुँदा समेत जनताहरूले उनले न्याय पाउने र घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउनेमा आसावादी उत्तिकै छन् ।
राज्यको सबै भन्दा माथिल्लो निकायमा उहाँकै श्रीमती हुँदा समेत यो विषय किन उठ्दैन ? उहाँको मृत्युपछि पनि युट्युबमा रहेका उहाँका भाषण सुन्ने हो भन्ने उहाँ साँच्चीकै राष्ट्रवादी नेताको रूपमा देखिनुहुन्छ । राजा रहने वा नरहने कुराले त्यत्रो ठुलो आपत्ति गर्दैन तर सामन्तवाद, दलाल, नोकर शाही र पुँजीवाद रहिराख्यो भने वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन भन्ने उहाँको शब्द सुन्ने हो भने आजका केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहका राजा महाराजाहरूलाई अपमान भए पनि उहाँको त्यो भाषण आम मानिसको मनमा बस्न सफल देखिन्छ । कोहीलाई पनि लाग्छ म जन्मेको नै थिएन उहाँले संसार छोडी सक्नु भा थ्यो पढ्दै गर्दा र उहाँको इतिहास बुझ्दै जाँदा म उहाँ प्रति आकर्षण र उनले प्रतिपादन सिद्धान्त सबैको लागि लोकप्रिय रहनु भनेको उहाँ प्रतिको सम्मान हो ।
मदन भण्डारी एक कम्युनिस्ट आदर्श भए पनि उहाँले देखेका सपनाहरू पूरा गर्न अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारलाई के ले रोकेको छ ? उहाँको हत्याकाण्डको बारेमा जनताहरूले तत्काल सत्य , तथ्य र निष्पक्ष रूपमा खोजबिन हुनुपर्छ । जननेता भण्डारीको आत्माले त्यति बेला मात्र शान्ति पाउने छ, जति बेला उनको हत्याका डिजाइनरहरू पर्दाफास हुन्छ । अनि कानुनी कठघरामा आउँछन् । दिवंगत नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन !!!